I-Stable Android Pie ikhutshwe ngokusesikweni kwi-OnePlus 3 kunye ne-3T | I-Androidsis
Iindaba ezimnandi zabasebenzisi be I-OnePlus 3 kunye ne-3T: Inkampani ikhuphe ingxelo ezinzileyo ye- Android Pie ezi zixhobo ekugqibeleni!
Kwaye ukuba ukumiliselwa kweeflegi zayo ezintsha, eziyi-OnePlus 7 kunye ne-7 Pro, kuye kwacaca ukuba umenzi waseTshayina akazilibali iimodeli zakudala zeriphabhlikhi yayo, ngokunjalo, nangona ingeyiyo enye okhawulezayo ukubonelela ngohlaziyo, kulindelekile.
Uhlaziyo, inokuba yintoni enye into, iza phantsi kwe-OxygenOS. Ngokweenkcukacha, uguqulelo lolu luhlu ngokwezifiso luba ngu-9.0.2 kwaye lubandakanya amanqaku amaninzi, ukuphuculwa kunye nokulungiswa.
Nangona kunjalo, linani eliqingqiweyo labasebenzisi abaya kuba nakho ukuyifumana namhlanje, kodwa kamva eli nani liya kwandiswa de bonke abasebenzisi be-OnePlus 3 kunye ne-3T bayifumane ngokuqinisekileyo. Ukongeza, inkampani ixele ukuba ukusetyenziswa kweVPN eyahlukileyo okanye enye indlela ayizukufumana ukufumana uhlaziyo kwakamsinya. Ke ngoko, ekuphela kwento eseleyo kukulinda ukufumana i-firmware entsha kwifowuni ngendlela esemthethweni narhoqo, ngaphandle kwezindlela ezimfutshane, njengoko kungekho nanye.
Olu lutshintsho olwenziwe yi-Android Pie phantsi kwe-OxygenOS 9.0.2 ezisa i-OnePlus 3 kunye ne-3T:
3 Imowudi yomdlalo omtsha 3.0
Inkqubo ihlaziyiwe kwi-Android 9 Pie.
Ujongano lomsebenzisi omtsha we-Android Pie.
Uhlaziyo lwepatch yokhuseleko kwi-2019.4 (ehambelana nenyanga ka-Epreli).
Ngoku ungalungisa uluhlu lwamaxesha kwimowudi entsha yokungaphazamisi.
Imowudi yomdlalo omtsha 3.0
Ixhasa umxholo wombhalo wezaziso iintloko phezulu.
Yongeza isaziso seminxeba yomntu wesithathu.
Ibhukumaka ngoku ixhasa uGoogle Duo.
Ixhasa iilensi zikaGoogle ukuze zikunike amava anamandla okuqonda umfanekiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Stable Android Pie ikhutshwe ngokusesikweni kwi-OnePlus 3 kunye ne-3T
"Into eseleyo kukulinda ukufumana i-firmware entsha kwifowuni ngendlela esemthethweni narhoqo, ngaphandle kweendlela ezimfutshane, kuba azikho."
Uyaphazama, ukuba zikhona. Kuya kufuneka ufake uhlaziyo lweoksijini kwivenkile yokudlala kwaye ngokukhuphela uhlaziyo olupheleleyo, ungalwandisi, ulugqibe kwaye ulufake kukhetho olunayo ifowuni, iya kubiza ukuphuculwa kwendawo eku "hlaziyo" kwaye yiyo loo nto. Ukuba unayo ifowuni yesitokhwe ilula nje ukuba uyivulile okanye i-rom okanye enye into sele inzima.
Uhlaziyo lwe-oksijini yinto endala eyaziwayo kubasebenzisi be-oneplus kwaye i-rom ikhutshelwa ngokuthembekileyo kwiiseva ezisemthethweni ze-oneplus kwaye ihlala ihleli ngaphandle kokuguqula nantoni na esiyaziyo kwi-hash.
Ke sele uzenzile ezi ndaba zilandelayo, «hlaziya i-Op3 / 3t yakho kwi-android 9 esemthethweni esisemthethweni 1 ikhonkco Mega akukho fake 100% yokwenyani incl.»